DAAWO: Itoobiya & DF Soomaaliya oo isku duba-ridaya qorshw culus oo Jubbaland.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar laga helay dhinaca Sirdoonka labada dal ee Soomaaliya & Itoobiya ayaa daaha ka rogaya qorshe dhameystiran oo hadda lagu dhaqaaqay fulintaas, kaas oo ay iska kaashanayaan dawladdaha Soomaaliya iyo Itoobiya, kuna wajahan Jubbaland sidii gacanta loogu dhigi lahaa.
Isku duba-ridka qorshahan ayaa bilowday markii ay labada dhinacba horey ugu fashilmeen wajiga 1aad oo ahaa in ay howlgal wadajir ah ka sameeyaan magaalada Kismaayo 19-kii August, xiligaas oo ay maalmo yar ka harsanayd doorashada Madaxwene-nimada Jubbaland.
Howlgalkan cusub ayaa ka bilaaban doona magaalada Baydhabo, waxaana hadda wadajir u diyaarinaya Raysalwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo ay wehliyaan qaar kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiyaanka.
194 Askari oo katirsanaa ciidamo loo qorsheeyey in ay tagaan Kismaayo maalmihii August oo ay diiday Jubbaland ayaa wali kusugan magaalada Baydhabo, waxaana sidaas oo kale maanta magaaladaas tagaya Taliyaha NISA ee Soomaaliya Fahad Yaasiin oo u tagaya arrimaha la xariira howlgalkan.
Howlgalka cusub ayaa qorshihiisa koowaad yahay in ay ciidamada dawladda Soomaaliya ee kasoo baxay Shabeelooyinka iyo kuwa ka baxay Baydhabo ay iskugu tagaan agagaarka magaalada Bu`aale oo ay qabsadeen, ka dibna magaaladaas lagu qabto kulan lays kugu keeno mucaaradka Axmed Madoobe oo ay halkaas ku qabsadaan kulan muhiim ah.
Fulinta qorshahan ayaa qaadan doona waqti dheeraad ah, waxayna Xukuumadda Soomaaliya waqti badan galinaysaa sidii u qabsoomi lahaa ka hor waqti roobaadka oo hadda ku soo wajahan Koonfurta dalka, iyadoo dadaalka ugu badan uu kasocda xaafiisyada Taliyaasha ciidamada dawladda Faderalka.